दीपिकालाई एकै चोटी दुई खुशी, जन्मदिनमा इन्गेजमेन्ट ? « News24 : Premium News Channel
दीपिकालाई एकै चोटी दुई खुशी, जन्मदिनमा इन्गेजमेन्ट ?
मुम्बई । बलिउडकी चर्चामा रहेकी नायिका दीपिका पादुकोणलाई लिएर यतीखेर दुई कुराले चर्चामा पुर्याएको छ । नयाँ वर्ष २०१८ को पूर्वसन्ध्यामा उनको मूख्य अभिनिय रहेको र विवादमा रहेको फिल्म ‘पद्मावती’लाई भारतीय फिल्म सेन्सर बोर्डले अन्ततः पास सर्टिफिकेट दिएको छ भने त्यस्तै अर्को उनको आउँदै गरेको जन्मदिनमा रणवीरसँग ईन्गेजमेन्ट गरीन लागीएको हल्लाले बलीउडमा चर्चा कमाएको छ ।
लामो समयदेखि प्रेमी अभिनेता रणवीर सिंहसँग रोमान्स गरिरहेकी दीपिकाले हालै मात्र श्रीलंकामा रणवीरसँग नयाँवर्ष मनाइन् । जनवरी ५ मा आउन लागेको आफ्नो जन्मदिन पनि दीपिका श्रीलंकामा नै मनाउने मुडमा छिन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दीपिका र रणवीरको परिवार पनि इन्गेजमेन्ट र विवाहको योजना गर्दै यसको तयारीमा छन् ।रणवीर श्रीलंका एक विज्ञापनको सुटिङका लागि गएका थिए । यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै प्रेमी भेटेर नयाँवर्ष मनाउन पनि दीपिका उतै उडेकी थिइन् ।
रणवीरले केही समयअघि मात्र दीपिकाको परीवारसँग भेटेका थिए । बलिउडमा लभ बर्डको रुपमा हेरीएको यो जोडीले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा संचारमाध्यममा भने आफ्नो प्रेम स्वीकारेको छैन । तर, पनि यो जोडी विभिन्न कार्यक्रममा सँगसँगै देखिँदै आएको छ ।
हालै मात्र एक अन्तर्वातामा दीपिकाले रणवीरसँगको सम्बन्धलाई लिएर आफूहरूको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता नरहने बताएकी थिइन् ।